Diyo post :: कसले किन गर्दैछ अाजको उपत्यका बन्द ? गृह प्रवक्ता भन्छन्,‘दुर्घटना हुनसक्छ !’ कसले किन गर्दैछ अाजको उपत्यका बन्द ? गृह प्रवक्ता भन्छन्,‘दुर्घटना हुनसक्छ !’ - Diyo post
कसले किन गर्दैछ अाजको उपत्यका बन्द ? गृह प्रवक्ता भन्छन्,‘दुर्घटना हुनसक्छ !’
काठमाडौं, १९ पुस । पछिल्लो समय बन्द संस्कृति हराउँदै गएको थियो । तर, भोलीको ‘उपत्यका बन्द’ले फेरी सर्वसाधरणलाई झस्काएको छ । विभिन्न बहानामा गरिने बन्दलाई पूर्ण रुपमा ‘बन्द’ गरिनुपर्ने आवाज नउठेको होइन तर, बन्द संस्कृति मौलाउँदै जाने होकी भन्ने चिन्ता समेत बढ्न थालेको छ ।
सरकारले सडक विस्तारको क्रममा उपत्यकाबासीको ‘थातथलो उठाएको’ भन्दै भोली राजधानी काठमाडौं सहित उपत्यकाको तीन जिल्ला बन्दको आयोजना गरिएको छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले भोलीको बन्दको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
उनीहरुले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । ‘उपत्यकाबासीको आफ्ना पुख्र्यौली थातथलो घर तथा जग्गाबाट सडक विस्तारको नाममा मुआब्जा नदिइ उठीबास लगाउने कार्यको विरोधका लागि, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तरिम आदेशको उलंघन गरी बुल्डोजर लगाउने कार्य रोधी, कानुनी शासन कायम गर्न लगायत विभिन्न १० बुँदे माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
बन्दकर्ताहरुले कुटनीतिक नियोग, एम्बुलेन्स, पत्रकार, मानवअधिकार, दुध तथा पानी बोकेको गाडी र पर्यटक बोकेको गाडी भने निर्वाध रुपमा चल्न दिने बताएका छन् । उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभरी विभिन्न १२ संघर्ष समितिहरु बनाएका छन् ।
दुर्घटनाको सम्भावना छ : गृहप्रवक्ता
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले दुर्घटना हुन सक्ने संकेत गरे । ‘भोलीको बन्दकर्ता फरक प्रकृतिको छ,’ उनले भने, ‘माग फरक छ, त्यसकारण दुर्घटना हुनसक्छ ।’